Amakati eNoti yiwebhusayithi ebikwazisa ukusukela ngo-2012 ngayo yonke into oyifunayo ukuze unakekele ikati yakho: izifo, izinto eziyifunayo, indlela yokukhetha ukutya kwayo, ziziphi izifo ezinokuba nazo, nokunye okuninzi, ukuze ungonwabela inkampani yakho iminyaka emininzi. Ngokuya kubaninzi ngokuya kubamnandi.
Iqela labahleli beNoti Gatos lenziwe ngaba bahleli balandelayo. Ukuba unomdla wokusebenza nathi, kufuneka nje gcwalisa le fomu ilandelayo Kwaye siya kunxibelelana nawe.
2 Abahleli bangaphambili
Ndithathela ingqalelo iikati ezintle izilwanyana esinokufunda okuninzi kuzo, kwaye nakuthi. Kuyatshiwo ukuba ezi fonts zincinci zizimele kakhulu, kodwa inyani kukuba bangamaqabane amakhulu kunye nabahlobo.
Kuba ndiyakhumbula ndingazibona ndithanda ikati. Ndiyazi kakuhle kuba kuba ndandimncinci kakhulu ndineekati ekhaya kwaye ndiye ndanceda iikati ezazinengxaki ... andikwazi ukukhulelwa ubomi ngaphandle kothando lwabo kunye nothando olungenamiqathango! Ndihleli kuqeqesho oluqhubekayo ukuze ndikwazi ukufunda ngakumbi ngazo kwaye iikati eziphantsi kolawulo lwam, zihlala zikhathalele kwaye zibathanda kakhulu. Ke ngoko ndiyathemba ukuba ndingaluhambisa lonke ulwazi lwam ngamagama kwaye ziluncedo kuwe.
NdingumColombia othanda iikati, endinomdla kuzo kakhulu malunga nokuziphatha kwabo kunye nolwalamano abanalo nabantu. Zizilwanyana ezikrelekrele kakhulu, kwaye azikho nesithukuthezi njengoko bezinokukholelwa kuthi.
Ndingatsho ukuba ikati inokuba ngumhlobo osenyongweni womntu. Bahlala bejikelezwe ngabo, bayandichukumisa kwaye bayandimangalisa ngamandla abo okulungelelanisa kwaye, ngaphezulu kwako konke, uthando olungenamiqathango abakubonisa lona. Ngaphandle kokuzimela kakhulu kwaye unodumo lokuzimela, ungasoloko ufunda okuninzi kubo, ukuba unomonde wokuzifunda.
Ndiziva ndinomdla omkhulu malunga nehlabathi leekati ezikhokelela ekubeni ndiphande kwaye ndifuna ukwabelana ngolwazi lwam. Ukwazi isimilo sabo, ulwimi lwabo lomzimba, kunye nendlela yabo yobomi kubalulekile ukuze bahlale kunye.